Dowladda Soomaaliya oo rabta dedejinta shirka lagu dhisayo maamulka gobollada dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay ineey dardar gelineyso howsha maamul u sameynta gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud.
Sii hayaha xilka wasaaradaasi C/llaahi Goodax Barre ayaa ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaaban doonto howsha maamul u sameynta gobollada dhexe, kadib marka guddiga farsamada ay gaaraan goobta shirka lagu qabandoono.
Goodax ayaa tilmaamay in dhismaha maamulka gobollada Mudug iyo Galgaduud uu faa’iido badan u leeeyahay bulsha weynta ku dhaqan gobolladaasi, isagoo rajeeyay ineey meesha ka bixi doonaan dagaallada iyo amnidarada mararka qaar ka dhaca gobolladaasi.
Mudane Goodax ayaa kula dar daarmay gudiga farsamada ee maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud, iney dar dargeliyaan howsha dhismaha maamulka, isagoo ku dhiiri geliyay in wasaaraddu ay gacan ka siin doonto howshi ku adkaata ee ku aadan dhismaha maamulkaasi,.
Goodax ayaa sidoo kale, guddiga farsmada kula dardaarmay iney ka fogaadaan siyaasad oo ay ka shaqeeyaan farsmada shirku ku guuleysan lahaa.
Wuxuu sidoo kale, kula dardaarmay iney ka shaqeeyaan sidii ay shaqada u wadaagi lahaayeen ciidamada AMISOM ee halkaas u tegay sugidda amaanka shirka iyo ciidamada Soomaaliya.